एमसीसी हितविपरीत लागे नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ: अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी - BBC News नेपाली
एमसीसी हितविपरीत लागे नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ: अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी
खासगरी सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै यो सम्झौता उचित छ कि छैन भन्नेबारे दुई थरी मत पाइन्छ।
सरसरती हेर्दा एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
यहाँ दुईबीच कुनै प्रस्ट सम्बन्ध छैन। मैले पनि ती प्रेस विवरण थाहा पाएको छु। त्यो सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरूले केवल त्यसका कार्यक्रमका अन्तर्वस्तुसँग सम्बन्ध राख्छन्।
एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएकोबारे म जानकार छु। तर यथार्थ के हो भने ती सत्य होइनन्।
त्यसैले बहसलाई यो सम्झौताका तथ्यमा फर्काउने काममा हामी खुसी नै छौँ। साथै सम्झौताका विषयवस्तुमा कुरा गर्न, कसरी यो सम्झौता भएको थियो भन्ने बारे कुरा गर्न राम्रो हुन्छ।
हामीलाई लाग्छ यसमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ। चाँडै नै अगाडि बढ्नुपर्छ।
यस सम्झौता भएको समयतालिका एकपटक समीक्षा गर्नु जरुरी छ।
नेपालसँग एमसीसी सम्झौता गर्ने बारे पहिलो कुराकानी सन् २०१२ मा भएको थियो। सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए।
७. विवादको एउटा विषयचाहिँ उक्त सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लेखित अतिरिक्त सर्त रहेको छ जसले नेपाल सरकारलाई अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी एउटा योजना पेश गर्न भनेको छ जुन, सम्झौताकै भाषामा, रूप र सारमा एमसीसीलाई स्वीकार्य अनि भारतको सरकारले पनि मानेको होस् - भन्ने छ। कतिपय मानिसले यसरी नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतामा भारतको अनुमति आवश्यक पर्ने बुँदा किन राखिएको भन्ने प्रश्न गरेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
अहिले चर्चामा आएका बीआरआइ वा आइपीएसभन्दा निकै पहिलेको कुरा हो त्यो।
यो अभियान बीस वर्षदेखि चलेको छ र यसले दर्जनौँ देशमा सफलतापूर्वक सम्झौता गरेको छ। अनि, हामीलाई लाग्छ नेपाल पनि यो सूचीमा अर्को देश होस्।
हाम्रो सम्बन्ध धेरै विस्तृत छ जसले नेपालको विकास आवश्यकताका यावत विषयवस्तु समेट्छ।
बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत् भएका बलिया साझेदारी तथा द्वीपक्षीय सम्बन्ध जुन सत्तरी वर्षदेखि झन् झन् उचाइमा पुगेको छ।
एमसीसी विवाद: सहमति संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न ढिलो भए नेपालले 'थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने'
१२ फेब्रुवरी २०२०
एमसीसी विवाद: विरोधी र समर्थक नेता रहेको खनाल कार्यदलको मार्गचित्र
२ फेब्रुवरी २०२०
'एमसीसी परियोजना कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन': अमेरिकी दूतावास
एमसीसी सम्झौता: नेकपाका नेताले दिए संशोधन गर्नुपर्ने कारण
१७ डिसेम्बर २०१९
भिडिओ, मायालु जोडी: सन् १९४७मा भएको यूकेको शाही विवाह, समयावधि 1,22
भिडिओ, राजकुमार फिलिप: निधनको घोषणा अनि शोकमग्न यूके, समयावधि 1,01
भिडिओ, जन्मजात दृष्टिविहीन भए पनि स्नातकोत्तर पढेर सक्षम बनेका दिदीबहिनी, समयावधि 3,09
भिडिओ, खानेकुरा खाएको भिडिओको कसरी महिलालाई स्वतन्त्र बनाउँदैछ?, समयावधि 2,39
भिडिओ, कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूका नाकामा एन्टिजन परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन अझै भएन, समयावधि 2,20
भिडिओ, फ्रान्स आगलागी: आगो लागेको भवनमा चढेर दम्पती र शिशुको नाटकीय उद्धार, समयावधि 0,24
भिडिओ, कोभिड खोपः ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के हुन्, समयावधि 2,36
भिडिओ, कोरोना भाइरस नेपाल: जुम्लामा चार घण्टा बोकेर लगियो कोभिड खोप, समयावधि 2,04
भिडिओ, आठ गोल गरेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन चिप्लिएर लडे, समयावधि 0,22
११ मई २०१९